Support – BAIC Myanmar
After Sales Service - Question & Answer
Q1 : Warranty ? Which Parts Cover in Warranty?
3 years (သို့မဟုတ်) 100,000km (Engine, Gear Box)
Q2 : အောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ Warranty ဘယ်လိုပေးလဲ ?
ပျှမ်းမျှ Kilo 100,000 ပေးပီးတော့ ဖြစ်လာတဲ့ Case ပေါ်မှာမူတည်ပြီး Service Technician (သို့မဟုတ်) Service Manager က Warranty Cover ဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးပြီး ပြန်ပြောပေးပါတယ်။
Q3 : Warranty ကိုဘယ်အချိန်ကစပြီးသတ်မှတ်လဲ ?
ကားထုတ်သွားတဲ့နေ့ကစပြီး Warranty Count သတ်မှတ်တယ်။
Q4 : ကားထုတ်သွားပြီး Warranty Period အတွင်းတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ?
Manufacture Error or Factory Error တခုခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးသေချာစစ်ဆေးပြီး Parts ဖိုးကော Larbor Charge ကောတစ်ပြားမှမယူပဲ Free အကုန်လုပ်ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် Service ကစစ်ကြည့်လို့User Fault ဆိုရင်တော့ Warranty Cover မဖြစ်ဘူး။
Q5 : Warranty Type ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ ?
Q6 : Oil Change Service ကို Kilo ဘယ်လောက်ထိပေးလဲ ?
ပထမဆုံး Kilo 3000 Free Oil change ပေးမယ်။ သို့ပေမယ့် Engine Oil Filter ဝယ်ရပါမယ်။ Kilo 3000 ပီးသွားရင် နောက် Kilo 8000 ကစပြီး customer ဆီကနေပြီး Charge စလုပ်မယ်။ Kilo 5000 ပြည့်တိုင်း Service ပြန်ဝင်ရမယ်။
Q7 : Spareparts တွေက ဈေးကြီးလား? မရှိခဲ့ရင် ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ?
Spare Parts ဈေးနှုန်းများမှာအခြား Japan နှင့် Europe ကားများကဲ့သို့အလွန်မြင့်မားခြင်းမရှိပဲချိုသာသောဈေးနှုန်းများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Parts မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် Order3မျိုးမှာလို့ရမယ်။
(1) Regular order ရှိမယ်။2months လောက်ကြပါမယ်။
(2) DHL service နဲ့ပို့တာရှိပါမယ် ပိုပြီးဈေးကြီးမယ်။ Custom Duty + Kg ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပေးရမယ်။
(3) Emergency Order ကတော့တစ်လကို ၃ကြိမ် ရှိမယ်။ Normal ပုံမှန်ဈေးထက်များပါလိမ့်မယ်။ Customer ဘက်ကနေကျခန်ရပါမည်။
Q8 : ကားတစီးပြင်ရင် ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ?
ကားပြင်တဲ့အပိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ Time Frame ပေးပါမယ်။ သို့ပေမယ့် ပြင်နေရင်း တခြား အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Parts တွေလဲရမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်ထပ်ပေးရပါမယ်။
Q9 : Warranty ကုန်သွားရင် ဘယ်လို Services တွေပေးမလဲ?
Service Centre မှာ Service လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် / Parts ဝယ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတစ်နေရာထဲမှာရရှိနိုင်တယ်။
Q10 : Warranty စာအုပ်ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
Warranty Book ကအရေးကြီးတယ်။ ကားတစ်စီးရဲ့ Maintenance History ကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက်သေချာသိမ်းထားရမယ်။ ပျောက်သွားရင် 50000 ကျပ် Charge ကျပါမယ်။ တကြိမ်ပဲရမယ်။
Q11 : Service Centre ဘယ်နေရာတွေမှာရှိမလဲ ?
Ygn : No.74, (1) Street, Waizayandar Road, (8) Qtr, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar.
Mdy : No. (Y/30/13), Corner of 58th & 43rd Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay, Myanmar.
အပြင်မှာ Service ကိုမသိပဲလုပ်မိတာတို့ / Company ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Engine Oil မထည့်ပဲအပြင်ကနေဝယ်ပြီးထည့်မိတာတို့ / Company ကိုအကြောင်းမကြားပဲကားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဖြုတ်မိတာတို့ဆိုရင် Warranty ပျယ်ပြက်သွားမည်။ နယ်ရောက်နေလို့တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်နီးစပ်ရာ Service Centre ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးအကြောင်းကြားရပါမည်။
BAIC Company အကြောင်း
Q1 : BAIC Company ကို ဘယ်တုန်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့သလဲ ?
1958, Beijing မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
China Automotive industry ထဲမှာ အနှစ်(50) ကျော် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
Q2 : What is BAIC ?
Beijing Automotive Industry Holding Co.,Ltd.
Q3 : BAIC Group ရဲ့ Headquarters ဘယ်မှာရှိလဲ ?
Beijing China မှာ တည်ရှိပြီး အလုပ်သမားဦးရေ 130,000 ကျော်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကျသည်။
Q4 : Top-10 China Car Brand ထဲမှာ BAIC Brand က စာရင်းဝင်သလား ?
Top-10 China Car Brand မှာ BAIC Brand ကနံပါတ်-(4) စာရင်းဝင်ပါသည်။
Q5 : BAIC က ရန်ကုန်မှာအပြင် အခြားဘယ်နိုင်ငံမှာ ရှိပါသလဲ ?
Middle East , West Asia , Central Asia , Africa , South America and several other regions.
Q6 : China မှာ ကားထုတ်လုပ်တဲ့ company ထဲမှာ အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ?
China မှာ Fourth largest ကားထုတ်လုပ်တဲ့ Company ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို ကားအစီးရေ ပေါင်း More than2million နှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နေသည်။
Q7 : ဘာကြောင့် SENOVA Model လို့ခေါ်သလဲ ?
At the end of 2009, BAIC Motor ကနေပြီးတော့ European Car Brand SAAB (SWEDEN) ရဲ့Platform, Engine , Transmission နည်းပညာ အစဆုံး ကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ 2012 ခုနှစ် ကနေစပြီးတော့ SENOVA Series ဆိုပြီး စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
China မှာ BAIC Group က Hyundai & Mercedes Car တွေကို China Market အတွက် ပူးတွဲပြီး ထုတ်လုပ်သည်။ BAIC ရဲ့ Design တွေကို Italian Famous Car Designer (Leonardo Firavanti) ကနေရေးဆွဲပြီးတော့ Located in ITALY (Turing Styling Centre).
SENOVA D-50 Question & Answer
Q1: Car Model Name ? Year ဘယ်ခုနှစ်ထုတ်တာလဲ?
BAIC Senova Series 2nd Generation D50 /Affordable Sedan or Saloon / 2019 အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ 1st Generation ကိုတော့ (2014-2017) ထိထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Q2 : Engine Power + ဂီယာဘယ်နှစ်ချက်လဲ ?
1.5L A151 All Aluminum Engine / 115hp / (6-speed CVT Transmission) Sport Mode ကို Manual နဲ့ကစားလို့ရမယ်။
Q3: Car Dimension?
Length – 4630mm / Width – 1820mm / Height – 1480mm / Wheelbase – 2670mm
Q4: Exterior မှာဘာတွေထူးခြားမလဲ?
အဓိကထူးခြားတာကတော့body size ပေါ့ Toyota Vios / Mitsubishi Attrage / Nissan Sunny / Suzuki Ciaz / Hyundai Accent တို့ထက် length ကော Width/ Height ကအစ ပိုပြီးကြီးတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ wheel base 2670 mm ဆိုတော့ နောက်ခန်းကော/ရှေ့မှာရော ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း ရှိမယ်။ Economy Class ထဲမှာ တော့အတွင်းခန်း/အပြင်ခန်း မှာ Qualityကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်ထားတယ်။
Headlight ကို Halogen Headlight အသုံးပြုထားတယ်. Rear Taillight ကတော့ LED Piano Design မီးသီးကိုသုံးထားတယ်။
ရှေ့မျက်နှာကတော့ BAIC ရဲ့ New style front chrome grille design ကိုသုံးထားတယ်။
Q5: LED Day light running ပါမလား ?
LED Daylight Running + Foglight ပါတယ်။
Q6: Rim Size ?
16 inch size Alloy Wheel ပါတယ်.
Q7 : Safety ပိုင်းမှာ ဆိုရင် ဘာတွေပါမလဲ?
Total Airbag4လုံးပါမယ်။ Front Driver seat & passenger seat အတွက် နှစ်လုံး / Side Airbag နှစ်လုံး ဆီပါဝင်သည်။
2015 C-NCAP 5th star Security Rating ရထားတယ်။
ABS+Traction Control System/Bosch 9.1 ESP System/ Mercedes ကားတွေမှာပဲပါတဲ့(Electronic stability Program) Brake system /တွေသုံးထားတယ်။
Lane Departure Warning / Moving Object Detection / Blind Spot detection
Tire Pressure Monitor System ပါမယ်။ Child Safety lock + ISOFIX (Child Safety Seat Attachment).
Automatic Fuel Cut Off system ပါတယ်။
Electronic Power steering ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ဆီစားသက်သာမယ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကားကို Control လုပ်ရတာပိုပြီးလွယ်ကူမယ်။
Q8 : Car ရဲ့ Interior ကိုလဲရှင်းပြပေးပါဦး ?
Red leather seat ကိုအတွင်းခန်းအစအဆုံးအသုံးပြုထားတယ်။
အတွင်းခန်းကိုကြည့်တာနဲ့ Mercedes design နဲ့ဆင်တူတာကိုတွေ့ရမယ်။ Leather Seats အတွင်းခန်ထိုင်ခုံတွေပါတယ်။
Steering မှာဆိုရင် Cruise Control ရယ် / Digital Screen ကို Control လုပ်လို့ရမယ့်ခလုတ်တွေရယ် Volume အတိုးအလျော့ / Telephone answer လုပ်တဲ့ button တွေအကုန်ပါမယ်။
Steering ဘယ်ဘက်အောက်မှာတော့ 360 Camera / Lane Departure Warning / Trunk opening buttonတွေ ပါမယ်။ တခြားကားတွေမှာမပါတဲ့ Auto mobile Data Recorder built in ပါမယ်. (Blackbox)
360 Degree Panoramic Camera with Parking Sonar ပါကင်ထိုးတဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူသက်တောင့်သက်သာထိုးလို့ရမယ်။ 360 Degree camera ကားရဲ့ ရှေ့နောက်ဘယ်ညာ အကုန်ကြည့်လို့ရမယ်။
Seat Adjustment ကတော့ Manual ပဲလုပ်လို့ရမယ်။ Both Side.
EPB (electronic Parking Brake) ပါမယ်။
Mercedes တွေမှာသုံးတဲ့Paino type key button တွေပါမယ်။
Aircon ကတော့ Round မဖြစ်ဘူး။ Auto Climate control ပါမယ်။
9 inch LCD Display Screen မှာဆိုရင်ကားတခုလုံးရဲ့ infotainment system ကို Control လုပ်လို့ရမယ်။
3 USB port ပါမယ်။ Sunroof အပေါ်မှာပါတယ်။ Panoramic တော့မဟုတ်ဘူး။
Speaker6လုံး ပါမယ်။
Q9 : Fuel Consumption ?
5.7L=100 km / Fuel Tank (50L) capacity
Q10 : Warranty ဘယ်လောက်ပေးလဲ?
3 year Warranty or 100,000 km ( Engine & Gear box )
Q11 : Awards ဘာတွေရထားလဲ ?
The 5th Xuanyuan 2018 Awards Winner ( For Perceived Quality In Economic Segment ).
SENOVA D70 Question & Answer
BAIC Senova Series 2nd Generation (2018 နောက်ပိုင်း ) D70 / Premium Grade Sedan or Saloon / 2019 အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ 1st Generation ကိုတော့ (2013-2017) ထိထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Q2: Engine Power + ဂီယာဘယ်နှစ်ချက်လဲ?
1.5 Turbo All Aluminum Supercharged Engine/ 150hp / Belgium Punch CVT6Speed Semi Auto အမျိုးအစားဖြစ်တယ်.
Q3: Car Dimension ?
Length – 4785mm / Width – 1835mm / Height – 1490mm / Wheelbase – 2780mm
Body size ကြီးမယ် ။ Wheel base က 2780mm ဆိုတော့ နောက်ခန်းလဲကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နဲ့ထိုင်ရတာကသက်တောင့်သက်သာရှိမယ်။ Comfort handling နဲ့ Luxury Driving experience ခံစားရမယ်. ရှေ့မျက်နှာပုံစံက Large Chrome grille ကိုအသုံးပြုထားတယ်။
Headlight က LED Intelligent Headlight System ဖြစ်တယ်. အလိုလျောက်ကားကွေ့တဲ့ပေါမှာမူတည်ပြီးရှေ့မီးကို adjust လုပ်ပေးတယ်. Highway မောင်းရင်လဲမီးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာ Auto high beam ဖွင့်ပေးတဲ့ system တွေပါမယ်။ ရှေ့ကကားလာရင်လဲ High Beam ကို Auto Switch off လုပ်ပေးတယ်။
Q5: Day light running ပါမလား။
LED Daylight Running + Foglight ပါတယ်။ နောက်မီးသီးက Piano Design LED taillight ပါတယ်။
Auto power side Mirrors ပါတယ်။ Remote central lock + Keyless Entry
Engine room ကို Full cover တပ်ဆင်ထားတယ်။
17 inch size Alloy Wheel ပါတယ်.
2018 C-NCAP 5th star Security design ရထားတယ်။
ရှေ့မီးကြီးကလဲ full led intelligent system ဆိုတော့လမ်းကွေ့တာတွေကိုအလိုအလျှောက် adjust လုပ်ပေးတယ်။
ရှေ့ကကားလာရင် High beam ကို auto Switch off ပေးတယ်။
Emergency Double flash brake light (Brake နင်းပြီဆိုတာနဲ့ brake light က double flash warning လုပ်ပေးပြီးတော့ နောက်မှာ ပါလာတဲ့ ကားကလဲ အရှိန်ကိုကြိုပြီးလျော့ထားလို့ရတယ်)
Premium design dashboard ဆိုတော့ကြည်ရတာ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိတယ်။
Leather quality ကလဲ premium ထဲကဆိုတော့ Soft Touch Feeling ခံစားရမယ်။
Leather Steering Wheel ကို Manual Adjust လုပ်လို့ရတယ်.
Cruise Control /Audio Control/ Telephone Control တို့ကို Steering wheel မှာ Control လုပ်လို့ရတယ်။
Driver Seat မှာဆိုရင် 6-way Electronic Adjustment လုပ်လို့ရမယ်။ passenger seat က Manual ပဲလုပ်လို့ရမယ်။
Automatic Climate Control system with PM 2.5 Air Filter ပါတယ်။
12.3 Inch Full LCD Monitor Display ပါမယ်။
4.6mm ကျယ်တဲ့Panoramic Sunroof ပါတယ်။
Dashboard အောက်မှာ Ambient light မီးတန်းလေး ပါတယ်။
Piano ခလုတ်တွေက နှိပ်ရတာကော / Control လုပ်ရတာပါ သက်တောင့်သက်သာရှိမယ်၊
Electronic Parking system With Auto Brake Hold ပါမယ်။
Push Start Buttom ပါတယ်။
တခြားကားတွေမှာမပါတဲ့ Auto Mobile Data Recorder built in ပါမယ်။ (Blackbox)
USB ကရှေ့မှာ2ခု / နောက်မှာ (၁) ခုပါတယ်။
နောက်ခန်း Aircon လေပေါက်ပါမယ်။
Speaker6လုံးပါတယ်။
6.5L=100 km /0-100 km (10.9s) / Fuel Tank (52L) capacity
Q10 : အောက်ပိုင်းတွေကရော ?
British Mila top Chassis UK Company Supplier နဲ့ သုံးထားတယ်။
Rear Wheel Following Steering System ပါတယ်။ BMW or Audi brand တွေလို အောက်ပိုင်းညိမ့်ညောင်းမယ်။
Q11 : Warranty ဘယ်လောက်ပေးလဲ?
SENOVA X55 Question & Answer
BAIC Senova Series 2018 2nd Generation (2018 နောက်ပိုင်း ) X55 / Comfort SUV 2019 အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ 1st Generation ကိုတော့ (2015-2018) ထိထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Q2: (2) WD (or) (4) WD ?
2 Wheel Drive ( Front Wheel Drive )
Q3: အရင် Model BAIC X25 နဲ့ကွာခြားချက်ဘာတွေရှိမလဲ ?
Senova Series မှာဆိုရင် X25 က 1st Generation , X55 က နောက်ဆုံး 2nd Generation ဆိုတော့ Face lift , Body Size , Rim size , Engine , Interior , Gear box & Suspension က အစ အားလုံး နည်းပညာအသစ် နဲ့ထုတ်လုပ်ထားသည်။
Q4: Engine က ဘယ်နည်းပညာ နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာလဲ ?
အရင်တုန်းက Mitsubishi နဲ့ဖက်စပ် ထုတ်ထားပြီး / ယခုအခါ မှာတော့ BAIC က အကုန်အလုံးလိုက် Modified လုပ်ပြီး ပြန်ထုတ်ထားပါသည်။
Q5: Engine Power + ဂီယာဘယ်နှစ်ချက်လဲ?
1.5 Turbo All Aluminum Supercharged Engine/ 150hp / Belgium Punch CVT6Speed Semi Auto အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။
Q6: Car Dimension ?
Length – 4480mm / Width – 1837mm / Height – 1680mm / Wheelbase – 2665mm
Q7 : Exterior မှာဘာတွေထူးခြားမလဲ?
အထူးခြားဆုံးကတော့ Front Grill ရုတ်ထွက်ကော Body size ကောအရင် Model နဲ့လုံးဝမတူတော့ပဲကွဲပြားစွာထွက်ရှိလာတယ်. Security ပိုင်းကော Design ပိုင်းမှာပါ Upgrade လုပ်ထားတာတွေ့ရှိရမယ်။ ကားမောင်းတဲ့အပိုင်းမှာလဲ SUV feeling ကိုအပြည့်အဝခံစားရမယ်။
Headlight က LED Intelligent Headlight System ဖြစ်တယ်။ မီးဖြူတွေကြီးပဲ။ အလိုလျောက်ကားကွေ့တဲ့ပေါမှာမူတည်ပြီးရှေ့မီးကို adjust လုပ်ပေးတယ်။
Q8 : Day light running ပါမလား။
LED Daylight Running + Foglight ပါတယ်။ နောက်မီးသီးက Piano Design LED taillight တပ်ဆင်ထားတယ်။
Q9 : Rim Size ?
18 inch size Alloy Wheel ပါတယ်။
Q10 : Safety ပိုင်းမှာ ဆိုရင် ဘာတွေပါမလဲ?
Brake System မှာဆိုရင် (ABS+Traction Control System), Bosch 9.1 ESP System/ Mercedes ကားတွေမှာပဲပါတဲ့(Electronic stability Program) Brake system တွေသုံးထားတယ်။
British Mira Top Chassis Company ကနေ Front Suspension ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပီးတော့နည်းပညာတွေကိုပြန်ပြီးသုံးထားတယ်။
Electronic Power Steering ကို Thyssen Krupp ဆိုတဲ့ German Company ( Audi / BMW ) တို့ရဲ. Main Supplier ဆီကနေအစအဆုံးပြန်ယူပြီးသုံးထားပေးတယ်။
Q11 : Car ရဲ့ Interior ကိုလဲရှင်းပြပေးပါဦး ?
ကားရဲ့အတွင်းခန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ထူးခြားတဲ့ Dashboard Design/ Seat မှာသုံးထားတဲ့ Leather တွေကအစ Quality ကောင်းကောင်းသုံးထားကိုတွေ့ရမယ်။
Steering မှာဆိုရင် Cruise Control ရယ် / Digital Screen ကို Control လုပ်လို့ရမယ့်ခလုတ်တွေရယ် Volume အတိုးအလျော့ / Telephone answer လုပ်တဲ့ button တွေအကုန်ပါမယ်။ Voice Control လုပ်လို့ရမယ်ခလုတ်တွေပါမယ်။
အရေးကြီးတဲ့ feature 1ခုကတော့ AI Voice Assistant (Artificial Intelligence) ဆိုတဲ့ Voice Control နဲ့ခိုင်းလို့ရတဲ့ system ပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ AC Control/Music Control/Window Up & Down ဆိုပြီးကားတခုလုံးရဲ့ Function တောတောများကို Control လုပ်လို့ရမယ်။
Car Condition Report ဆိုတဲ့ ကားတစီးလုံးရဲ့ Security Assistant ဆိုတဲ့ Maintenance Record/Oil change Time/ Gear Oil Limit/Battery Assistant / Fuel usage monitor / message Notification အနေနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်။
360 Degree Panoramic Image with Parking Sonar ပါကင်ထိုးတဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူသက်တောင့်သက်သာထိုးလို့ရမယ်။ 360 Degree Surround camera ကားရဲ့ ရှေ့နောက်ဘယ်ညာ အကုန်ကြည့်လို့ရမယ်။
EPB (electronic Parking Brake) ပါမယ်။ USB port3ခု ပါမယ်။ Wireless Charging မရဘူး။
Automatic Climate Control system ( Round Air Con ဖြစ်တယ်) Push Start Buttom ပါတယ်။
Infotainment အနေနဲ့9inch Central floating display ပါမယ်။
Panoramic Sunroof ပါမယ်။ Speaker6လုံးပါတယ်။ 380L capacity ကျယ်တဲ့နောက်ခန်းရှိမယ်။ နောက် Trunk က motor မပါဘူး။
Gear မှာလဲ sport mode ပါမယ် တောင်တက်တောင်ဆင်း manual gear နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Adjust လုပ်ပီးမောင်းလို့ရမယ်။
Q12 : Fuel Consumption ?
7.2L=100 km / Fuel Tank (55L) capacity
Q13 : Warranty ဘယ်လောက်ပေးလဲ?
+9594303 8888
Select Car Model X7 X55 D70 D50 BJ40L
No 74, (1)Street, Waizayadar Road, (8) Quarter, South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar
+959443 150 795, +95 95 013 988, +95 95 020 583
No (Y/30/13), Coner of 58th & 43rd Street , Mahar Aung Myay Township, Mandalay, Myanmar.
Aung Gabar Motor Service:
Connect With Baic Myanmar
Copyright ©2021BAIC MyanmarAll Rights Reserved. Created by